“Waxaan rajeynayaa in Barcelona aysan ku guuleysan doonin Champions League” – Vázquez – Gool FM
“Waxaan rajeynayaa in Barcelona aysan ku guuleysan doonin Champions League” – Vázquez
(La Liga ) 13 Abriil 2019. Xidiga khadka dhexe kooxda Real Madrid ee Lucas Vázquez ayaa wareysi uu bixiyay waxaa daabacay wargeyska “Marca” ee dalka Spain, wuxuuna ugu horeyn ka hadlay mustaqbalkiisa garoonka Santiago Bernabéu.
Sidoo kale laacinka reer Spain ee Lucas Vázquez ayaa wuxuu falanqeeyay xaalada kooxdiisa Real Madrid ee xilli ciyaareedkan, iyo mowduucyo kale.
“Waxaan isku dayi doonaa inaan wada guuleysano dhamaan kulamada inooga harsan xili ciyareedkan, runtii waa xili ciyaareed aad u adag, waxaa suuragal ah inay jireen wakhtiyo muhiim ah”.
“Uma nasiib badneyn sida sanadihii ugu dambeeyay oo kale, waxaana hada guranay mirihii aan ka dhaxalnay”.
Intaas kadib Lucas Vázquez ayaa wuxuu ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid wuxuuna yiri:
“Waan arki doonaa, sababtoo ah ma jiraan wax aan xiligan ka dhihi karo, balse waan arki doonaa, dabcan waxaan doonayaa inaan sii joogo Real Madrid, waxaan heystaa qandaraas ilaa iyo 2021, mana ku fikiro xiligan dalabyada kooxaha kale”.
“Sanad kasta waxaa jira ciyaaryahano lala xiriirinayo inay u dhaqaaqaan kooxda Real Madrid, waa wax iska caadi ah, waxaana ka mid ah Eden Hazard, waa la soo dhaweyn doonaa”.
“Waxaan aaminsanahay in sidoo kale saxiixa Paul Pogba uu noqon doono mid xiiso leh, waa ciyaaryahan cajiib ah isla markaana dhallinyaro ah, waan ku faraxsanaan doonaa hadii ay dhacdo inuu halkan nala joogo”.
Ugu dambeyn Lucas Vázquez ayaa wareysigan wuxuu ku rajeeyay in kooxda Barcelona aysan ku guuleysan xili ciyaareedkan tartanka xiisah badan ee Champions League.
“Aad ayaan u jeclahay Liverpool, Ajax waa koox da’ayar ah, waxay ciyaaraan iyagoo aan cabsi qabin, waxay og yihiin waxa ay sameynayaan, waa wax xiiso badan daawashadooda, ma doonayo in Barcelona ay ku guuleysato tartanka Champions League”.
Ciyaaryahan hore ee kooxda Chelsea ah oo saadaal ka bixiyay mustaqbalka Eden Hazard